RAAXADAGUURKA GUURKU WAA KAN KOOWAAD EE DHOWRA AADMIGA – Biyacade
RAAXADAGUURKA GUURKU WAA KAN KOOWAAD EE DHOWRA AADMIGA
GUURKU WAA KAN KOOWAAD EE DHOWRA AADMIGA
ALLE SWT wuxuu abbuuray lab iyo dhadig wuxuuna ugu tala galay in ay isku intifaacaan
Guurku diinta waa u gargaar,
shaydaanka waa u gablan iyo hoog,
waana gaashaan adag oo cadowga Eebbe
laga galo, waxaana ku badata ummadda
Islaamka si ay ula tartanto ummadaha
Eebbe waxa uu Aayaddiisa Qur’aanka ah
(U guuriya xaaslaawayaasha idinkamidka
ah iyo addoomadiinna kuwooda
wanwanaagsan “rag iyo dumarba”.
Hadday sabool yihiin Eebbe asagaa
deeqdiisa ku hodminaya, Eebbana waa
kii deeqdiisu dadka ku wada aaddo, cid
walbana duruufteeda ka warqaba.).
Rasuulka (Sallallaahu calayhi wasallam)
waxaa laga weriyey inuu yiri: (Isguursada
oo tarma ummadaha ayaan idinkugu
faanayaa maalinta Qiyaamaha eh).
Cumar (RC) waxa uu dhihi jiray: (Waxaan
u guursadaa saan wiil u helo), ibnu
Mascuudna waxa uu oran jiray: (Hadday
cimrigeyga toban beri oo keliyihi ka
harsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan
guursado, si aanan Eebbe uga hortegin
anigoo doob ah). Saxaabigii Mucaad Ibnu
Jabal daacuun baa ku dhacay, laba xaas
oo uu qabayna ka dilay, markaasuu yiri:
(War ii guuriya, ma jecli inaan Eebbe la
kulmo anoo doob ahe).
Qofkaan haddaba guursan karin sabab kastaa
ha kalliftee, waxaa habboon inuu is ilaaliyo
intuu faraj khayr qabaa uga furmayo. Eebbe
waxa uu leeyahay:
(Ha dhowrsadeen kuwaan awood guur
heli karaynin intuu Alle deeqdiisa kaga
hodminayo). Ibnu Mascuud waxa uu
ka weriyey inuu yiri: (Ninkii awoodi
karaa ha guursado maxaa yeelay guurku
aragga waa u dabool ibtana waa u
gaaashaan. Ninkaan awoodi karinse ha
soomo, soonkaa kacsiga ka bi’inayee).
Previous Sawiro dayac tir lagu sameeynayo Nalalka ku shaqeeya cadceeda ee magaalada muqdisho
Next DARDAARANKA HOOYADA HABEENKAAQALGALKA